ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ကြီးမားစွာ အထောက်အကူပြုရေး သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် ကတိပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) အလယ်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြည်ပ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် စကားပြောကြားနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကာကွယ်ရာ၌ ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြရန် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်က ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) အလယ်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီက နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် စကားပြောဆိုစဉ် ရှုပ်ထေွးသော အခြေအနေများကြား ဘေးကင်းသော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ အားကောင်းမှုရှိစေရန်နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ထားကြရန် ၎င်းတို့အား ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) အလယ်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် အရာရှိများ၊ စစ်သားများနှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထို့ပြင် PLA နှင့် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများ၊ စစ်တပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အရပ်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူ့စစ်နှင့် အရန်တပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း နွေဦးပွဲတော် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီက နွေဦးပွဲတော်နှင့် ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော် နှစ်ခုလုံးသည် နေရာတိုင်း၌ တည်ရှိနေကြောင်း၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအနေဖြင့် အသင့်အနေအထားရှိနေကြရန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် လူမှုတည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Xi pledges China’s greater contribution to world peace
BEIJING, Jan. 28 (Xinhua) — President Xi Jinping urged Chinese peacekeepers to playabigger role in defending world peace during an inspection to the Central Theater Command of the People’s Liberation Army (PLA) on Friday.
Xi extended Spring Festival greetings to service personnel of the PLA and the People’s Armed Police Force, civilian personnel posted in the military, and members of militia and reserve forces.
Noting that both the Spring Festival and the Beijing Winter Olympics are around the corner, Xi called on all the armed forces to stay ready and safeguard China’s security and social stability. ■
Photo 1 : Combo photo shows Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, talking with Chinese peacekeepers posted overseas via video link during an inspection to the Central Theater Command of the People’s Liberation Army (PLA) on Jan. 28, 2022. (Xinhua/Li Gang)
Photo2: Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, poses foragroup photo with representatives of officers and soldiers during an inspection to the Central Theater Command of the People’s Liberation Army (PLA) on Jan. 28, 2022. (Xinhua/Li Gang)